Jilaagii weynaa Cumar Shariif oo geeriyooday – Kasmo Newspaper
Jilaagii weynaa Cumar Shariif oo geeriyooday
Updated - July 11, 2015 4:38 pm GMT
Waxaa 10kii bishan Luulyo 2015 soo xirmay noloshii qof dunida dhaqanka iyo fanka kaalin sare uga jiray 60kii sano ee ugu dambeeyey. Waa Cumar Shariif qofkaasi, waxaana geeridiisu taabatay malaayiin ku kala uuman dacallada Dunida.
Wuxuu ahaa Atoore (Actor) wax ka jilay filimo badan oo shaac-baxay. Waxaa ka mid ahaa filimkii: ‘Lawrence of Arabia’. Wuxuu kaloo wax ka jilay Filimada ay ka mid ahaayeen: Funny Girl, Genghis Khan, iyo Che Guevara.
Wuxuu kaloo wax ka jilay filim ku saabsana qaabkii ay wax u ciqaabi jireen Nazigii Garmalka, isagoo wax ka jilay dadweyne maxaabiis ah, oo inta laga soo saaray xarun ciqaabeed (Concentration Camp), lagu fulinayo shaqo ciqaab ah, kuwaas oo itaal-darro badani ka muuqanayso, ka dibna waxaa soo booqanaysa qof haween ah oo dadka goobta ka shaqayna, cid ka baadi-goobaysa.
Markii haweeneydaasi goobta soo gaartay, ayaa hal mar dadkii xoogga looga shaqaysinayey, iyagoon isogeyn waxaa miyir qaaday muuqaalka haweeneyda, ka dibna ay oodda-jabsadeen, iyagoo ku qaylinaya: hal haween ah, hal haween ah, hal haween ah…
Waxay ahaayeen rag, maxaabiis aan waqti dhow arag nuur iyo naxariis haween, waxayna orod ku jiireen askartii ilaalada ahayd… Waxaa dhacaysa rasaas laga daba-ridayo dadka u qamaamaya xagga ay ka soo muuqatay qofka dumarka ahi….
Cumar Shariif wuxuu ku dhashay dalka Masar, 1932, waxaana reerkoodu waxbarasho xagga fanka ah ugu soo diray magaalada London, oo uu machad fanka iyo jilista laga barto uu arday ka noqday.
Wixii waqtigaas ka dambeeyey wuxuu ku jiray nolosha fanka iyo jilaanimada, wuxuuna ka mid noqday jilaasha ugu caansan ee Hollywood, isagoo qaatay abaalmarinada ugu sareeya ee lagu bixiyo jilaanimada.
Wuxuu ahaa nin ay ka damba-dhaceen gabdhuhu, waxaana la sheegay in codsi uga yimid hal bil gudaheed 25kun oo gadhood, kuwaas oo in uu guursado ka dalbanayey.
Waxaa lagu sheegay in uu ahaa nin cayaara, laguna falay Qamaar’, isagoo hal fadhi oo keliya ku lumiyey lacag looga helay Qamaar, ahayd wax ka badan hal milyan oo dollar!
Cumar Shariif sanooyinkii dambe, waxaa la sheegay in uu la xanuunsanayey cudurka Alzimerka ee dadka xusuusta ka qaada, wuxuuna dhintay isagoon xusuusan karin noloshii hore, xanuunkaas dartiis.
Magaalada Qaahira ayuu ku dhintay, 10 July 2015, isagoo jira 83 sano.